🥇 ▷ Kooxda Sileo waxay fureen fargeetada Cydia Diatrus, oo u oggolaaneysa Cydia… ✅
Kooxda Sileo waxay fureen fargeetada Cydia Diatrus, oo u oggolaaneysa Cydia…
Haddii aad isticmaasho jeegaga jeegaga oo aadan garaneyn sida loo isticmaalo qalabka cusub ee Rakibalaha Sileo si aad ugu hesho Sileo iPhone-kaaga ama iPad-ka sababtoo ah isku dhaca lala galay maamulaha xirmada Cydia ee horay loo rakibay, waxaan kuu haynaa war wanaagsan!
Iyada oo la kaashanayo hogaamiyaha Sileo Porter Diatrus, kooxda Sileo waxay si rasmi ah u fureen fargeeto cusub oo Cydia ah oo loogu talagalay kaydinta GetSileo taasoo u saamaxeysa sanduuqyada jeegga inay ku shaqeeyaan Cydia iyo Sileo dhinac isla aaladda iyagoo isticmaalaya isla nooca APT.
Diatrus wuxuu marka hore la wadaagay ujeedkiisa si uu u xaqiijiyo xaqiiqadan galabta Jimcaha. Subaxa Sabtida, tani waa markii ugu horreysey ee isticmaaleyaasha baarista 1aad ay isticmaalaan hal si rasmi ah loo taageeray Waxay macnaheedu tahay inaad Cydia iyo Sileo isku mar ku yeeshaan sanduuq isku mid ah. Maanta kahor, rakibaadda Sileo waxay si xoog ah u baabi’in doontaa Cydia iyo ku tiirsanaanteeda.
Xisaabaadka si loo helo rakibaha cusub ee Cydia waa sida soo socota:
Haddii aad isticmaashay qalab rakibayaal koox saddexaad oo Diatrus ah ka hor intaadan bilaabin maanta, markaa waa inaad ogaataa inay hadda tahay dariiqo gaboobey oo lagu rakibo Cydia iyo Sileo dhinacaaga aaladdaada oo aysan mar dambe taageeri doonin Ku-xirirka Diatrus-ka ee Sileo Kooxda. Kuwa doonaya xalka rasmiga ah ee la jaan qaadi kara waa inay isticmaalaan habka rakibida ee lagu martiqaaday kaydka rasmiga ah ee Sileo.
Laga soo bilaabo waxa aan ka soo qaadan karno, fargeeto cusub ee Cydia wuxuu u shaqeynayaa si la mid ah rakibaadda asalka ah ee Cydia, laakiin waxaad la kulmi kartaa khaladaad qaarkood markaad cusbooneysiineyso fontka (gaar ahaan keydka galka ee ‘Bingner’). Diatrus wuxuu sheegay in tani ay ahayd dhaqankii laga filaayay waqtigan isla markaana uu qorsheeyay inuu xaliyo qaladkan mustaqbalka. Dhanka kale, isagu ma uusan siinin ETA.
Waa in la ogaadaa in rakibahan hadda loogu talagalay oo keliya jeegaga baarista1, laakiin waxaad bilaabi kartaa nooca jabsiga aan waligeed dhicin mustaqbalka. Diatrus ma uusan dammaanad qaad siin tan dambe, laakiin waxay weli tahay tallaabo loo qaaday jihada saxda ah ee kuwa doorbida doorashada.
Waxa kaliya lagu tilmaami karo inay tahay tallaabo wax ku ool ah oo ay koox Sileo horay uqaadi jirtay, waxay umuuqataa in xabsiyada ugu dambeyntii ay heli karaan keegga sidoo kalena ay cuni karaan. Waa inay noqotaa mid xiiso leh in la arko sida mashruucan loo horumarinayo iyo sida ay bulshada u sameyneyso.
Ma rabtaa inaad ku rakibto Sileo jeegaga-jeex-jeex ee hadda sababtoo ah waxaad sidoo kale ku dhejin kartaa albaabka Cydia? La wadaag qaybta faallooyinka ee hoose.